Palletizer - Depalletizer - Delta Engineering Belzika
Archive avy amin'ny sokajy "Palletizers - Depalletizers"
Zoma 24 febroary 2017 by Cristina Maria Sunea
Fitaovana fametrahana takelaka - haavo ambany
Hevitra maodely sy malefaka izay afaka mametaka, mampiala ary manafangaro takelaka fisaka, zana-kazo ambony, fitoeram-baravarana, kapila, paleta… amin'ny tsipika mahazatra.
Hafainganam-pandeha ambany na ambany.
Haavo ambany (1600mm max).
Published in Palletizer - Depalletizer
Fitaovana fametrahana takelaka
Haavo feno (3500mm max).
Alatsinainy 27 Febroary 2017 by Cristina Maria Sunea
Takelaka fametrahana haavo avo lenta
Hevitra maodely sy malefaka izay afaka mametaka, mampiala ary manafangaro takelaka fisaka, zana-kazo ambony, fitoeram-paty, sarona, paleta… amin'ny tsipika haingam-pandeha.
Miaraka amin'ny kapila servo haingam-pandeha.
Alarobia 01 martsa 2017 by Cristina Maria Sunea
Singa palletising maodely ho an'ny vokatra ambany ambany
Fitaovana palletizing maodely miaraka amin'ny gripper shutter izay manakana ny tavoahangy ambany ambany ambany tsy hikororosy ao anaty kitapo rehefa alaina.
Module palletizing rotary sy singa manaparitaka modular
Hevitra maodely sy malefaka mamela ny fampiharana samihafa: palletizing, depalletizing & buffering.
Afaka mametaka / manafoana takelaka fisaka, zana-kazo ambony, fitoeram-bokatra, hood, pallet…
Afaka mahatratra toerana 4 amin'ny faribolana.
Modular palletizing linear sy singa mpamaritra
Afaka mahatratra toerana 3 amin'ny fomba mivantana.
▼Palletizers - Mpamatsy vola